मेस्सीले छाडेपछि बार्सिलोनाको हालत मन्दिरको घन्टी जस्तै, जो आउँछ बजाएर जान्छ ! - Thulo khabar
मेस्सीले छाडेपछि बार्सिलोनाको हालत मन्दिरको घन्टी जस्तै, जो आउँछ बजाएर जान्छ !
एजेन्सी : उरुग्वेली फरवार्ड लुइस सुआरेजले पुर्व क्लबविरुद्ध एक गोल र अर्काे असिस्ट दिएपछि स्पेनिस ला लिगामा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले एट्लेटिको म्याड्रिडसँग हार बेहोरेको छ ।
यस सिजन यो ९ खेलमा बार्सिलोनाको तेस्रो हार हो। जस मध्ये ३ खेलमा जीत निकाल्दा तीन खेल बराबरीमा सकिएको थियो। सिजनको पहिलो खेलमा रियल सोसीडाडलाई ४-२ ले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको क्याटालान क्लबले सिजनको दोस्रो खेलमा एथलेटिको म्याड्रिडसँग १-१ को बराबरीमा सकिएको थियो।
त्यस्तै ग्रनाडा र काडिजसँग लगातार २ खेलमा बराबरी खेलेको बार्सिलोनाले गेटाफे विरुद्ध २-१ र लेभान्ते विरुद्ध ३-० को जीत निकाल्न सफल भएको थियो। लालिगामा ७ खेलबाट १२ अंक जोडेर ९ औं स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगमा भने एक खेल पनि जित्न सकेको छैन।
समूह चरणका पहिलो २ खेलमा बार्यन म्युनिख र बेन्फिकासँग समान ३-० ले पराजित भयो। गयरातीको जितपछि अपराजित रहेको एट्लेटिकोले ८ खेलबाट १७ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानको रियल म्याड्रिडसँग अंक बराबरी गरेपनि गोल अन्तरमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दुवै टोलीको समान १७ अंक छ । रियलले एक खेल कम खेलेको छ ।-विगुल न्युज बाट